TPE Dolls Dolls oo raqiis ah iibka Qalabka Iibso Doll Love
Waa Maxay Qiimaha Ugu Wanaagsan ee TPE Doll Doll ee Iib ah
TPE lix caruusadood waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan dareen dhab ah. Waxay ku habboon yihiin kuwa cusub ee gacmaha jecel ama caruusadaha miisaaniyaddoodu hooseyso. Sababtoo ah maqaarka caruusadda galmada ee ka samaysan maadada TPE waa laastik, waa u siman yahay uguna sarreeyso sida maqaarka dhabta ah ee aadanaha. Qalabka TPE wuu ka raqiisan yahay silikoonka, xitaa dadka caadiga ah waxay iibsan karaan caruusadda galmada ee TPE iyaga u gaar ah. Waa kuwan caruusadaha TPE ee ugu saxsan. Ma waxaad tahay taageere weyn oo caruusadaha galmada? Miyaad murugootaa maxaa yeelay ma heli kartid doll kaa farxiya? Waxaa laga yaabaa inaadan hubin caruusadda kugu habboon. Markaas markaad halkan timaaddo, waxaad tahay qof nasiib badan. Halkan waxaad ka iibsan kartaa galmada ugu raqiisan uguna tayada sare leh doll tpe, dareenka maqaarka dhabta ah, oo aad u dhab ah. Aad ugu ammaan badan bini-aadamka, gudaha ayaa ah qalfoof bir ah oo waara oo qancin kara muuqaal kasta oo aad rabto. Waxaan haynaa tiknoolajiyad casri ah oo gaar ah iyo farshaxan heer sare ah.
Tayada Sare T Dolls Dolls Soo Iibso Qiimo Jaban
TPE waa shey aad u jilicsan. Waxaa hada si balaaran loogu adeegsadaa soo saarida doll love doll. Noocyadeenna jinsiga ah ee tpe-ka ah ee jaban ayaa laga sameeyay tiknoolojiyad sare oo TPE silikoon ah (oo sidoo kale loo yaqaanno caag-hawo-kuleylka), oo ah jilitaanka ugu dhow ee maqaarka aadanaha ee dhabta ah. Dhamaan caruusadaha urdolls waxaa gacanta ku xardhay sayid khibrad leh, faahfaahin walbana waa qumman tahay. Waxaan ku guuleysanay aqoonsiga kumanaan macaamiil ah oo leh xirfad-hufnaan, u heellan iyo dabeecad dhab ah. Waxaan ku kalsoonahay inaan ku siino alaabada ugu fiican iyo khibrada ugu fiican ee isticmaale. Ha ka waaban inaad dalbatid doll adiga kuu gaar ah. Way kuu iman doonaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si ay kuu raacaan oo kuu keenaan farxad aan dhammaad lahayn. Uma baahnid inaad ka walwasho cabashada maxaa yeelay had iyo jeer way kaa farxinayaan. Waa diyaar. Ku bilow noloshaada farxadda leh caruusadaha galmada hadda, taas oo ah maalgashi faa'iido badan leh. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan caruusadaha soo socda, fadlan si xor ah u nala soo xiriir si aad u hesho gargaar. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku caawinno.
Video ku saabsan caruusadaha galmada ee TPE: